Izeluleko ze-6 zokusebenza njengomphathi womcimbi | Ukwakheka nezifundo
Ukuqeqeshelwa umsebenzi wezandla
Iphrojekthi Yokugcina Yomsebenzi
Izindawo zokuhlala eNyuvesi
Izeluleko eziyi-6 zokusebenza njengomphathi womcimbi
UMaite Nicuesa | 09/06/2021 20:51 | Kubuyekezwe ku- 09/06/2021 22:18 | Ukuphuma Komsebenzi
Ngabe ufuna ukusebenza njengomsingathi womcimbi? Lona ngumsebenzi ohlinzeka ngamathuba amaningi emisebenzi ngoba izinkampani zibamba imicimbi eminingi yezinkampani. Kwi-Training and Studies unezeluleko eziyisithupha zokusebenza njengomsingathi womcimbi.
1 1. Bhala phindela futhi incwadi yakho yekhava
2 2. Isifundo somphathi womcimbi
3 3. Ama-ejensi abaphathi bemicimbi
4 4.UJobe unikeza ababungazi bemicimbi
5 5. Ikhalenda lemibukiso nezinhlangano
6 6. Dala umkhiqizo wakho ukuze uzihlukanise
1. Bhala phindela futhi incwadi yakho yekhava
Njenganoma yimuphi omunye umsebenzi, ukwakha i i-curriculum vitae okwenziwe ngezifiso kuyisihluthulelo sokwenza ngcono ukuseshwa kwemisebenzi kulo mkhakha. Ukuqeqeshwa nesipiliyoni okukhulunywe ngaso kwikharikhulamu kumele kuhambisane nenhloso kusuka ekusebenzeni njengomphathi womcimbi.
Lokho wukuthi, ungangezi lezo zifundo ezingangezi inani kumkhiqizo wakho. Kunemicimbi yezinhlobo ezahlukene. Amakhongolose ajwayelekile emanyuvesi. Ngakolunye uhlangothi, izinkampani zibuye zenze imicimbi yezinkampani.
2. Isifundo somphathi womcimbi
Ukuqeqeshwa okukhethekile kukuvulela iminyango ngoba uhlelo lwalezi zici luqeqesha labo abafuna ukuthuthukisa lo msebenzi. Kunamakhono amaningi namakhono okumele enze labo abenza lo msebenzi kumele bawakhombise. Ukwazi izilimi kubalulekile, ngoba, ngokwesibonelo, abanye babahambele umcimbi bangakwazi ukukhuluma isiNgisi, isiFulentshi noma isiJalimane. Amakhono enhlalo abuye abonise ukusebenza kahle kwezobuchwepheshe yalabo abanikeza insizakalo yamakhasimende efanelekile.
3. Ama-ejensi abaphathi bemicimbi
Kunamaphrojekthi agxile kulo mkhakha. Ama-ejensi asebenzisana ezinhlelweni zemicimbi ehlukene futhi lapho ungathumela khona i-CV yakho ukuthumela incwadi yakho yekhava. Nge-Intanethi ungathola imininingwane ngama-ejensi ahlukahlukene. Bheka iwebhusayithi namanethiwekhi omphakathi wephrojekthi ngayinye. Uma unanoma yimiphi imibuzo ongathanda ukuyicacisa, xhumana nebhizinisi ngezindlela ezihlinzekelwe le njongo kuwebhusayithi ye-ejensi.
4.UJobe unikeza ababungazi bemicimbi
Ukunikezwa kwemisebenzi eku-inthanethi kuhlala endaweni ebalulekile ekufuneni umsebenzi okusebenzayo. Ngokubonisana kaningi ngalezi ziteshi eziku-inthanethi ungathola izikhangiso ezikhethekile. Ngemuva kwalokho, funda isikhangiso ngokucophelela ukuthola imininingwane yomsebenzi kanye nezidingo okufanele zihlangatshezwe yilabo abazethula enkambisweni yokukhetha.
5. Ikhalenda lemibukiso nezinhlangano
Uma ungathanda ukuqala ukusebenza njengomsingathi womcimbi, kunconywa ukuthi waziswe ngemicimbi ebaluleke kakhulu eyenzeka unyaka wonke. Ungathola imicimbi emadolobheni ahlukene. Yiliphi ibhizinisi elibiza isenzo? Cishe uyakwazi thumela i-CV yakho ukuze bakwazi ukucubungula iphrofayili yakho emikhosini ezayo.
Ukuxhumana kuyisihluthulelo sokufuna umsebenzi namuhla. Kuyasiza futhi ukusebenza njengomphathi womcimbi, ngoba amanye amathalenta ayingxenye yenethiwekhi yakho yoxhumana nabo nawo angakwazisa ngezihloko ezihlobene nalo msebenzi.
Ukuhambela lezi zinhlobo zemicimbi kungakusiza uqonde kangcono umsebenzi wobungcweti bomcimbi. Izeluleko zalezi zingcweti zibalulekile ngoba zinikeza ukwelashwa okusondele kulabo abakhona.
6. Dala umkhiqizo wakho ukuze uzihlukanise
Wakha umkhiqizo wakho ngaphezu kokuqhubeka kwakho. Uxhumana nobuchwepheshe bakho ngokuziphatha kwakho. Ukugcina isikhathi kuyisibonakaliso somthwalo wemfanelo kulabo abasebenza njengomsingathi womcimbi. Kunconywa futhi ukuthi le phrofayili inesifiso sokusebenza eqenjini. Hlanganyela kumaphrojekthi nabanye ochwepheshe abenza ingqungquthela iphumelele.
Ngaphezu kokuthatha isifundo sokusebenza njengomsingathi womcimbi, ungabamba iqhaza nakumhlangano wokukhuluma obala. Ngale ndlela, uthola amakhono amasha, izinsizakusebenza namakhono azokusiza ukuthi uthuthukise inguqulo yakho enhle kakhulu.
Yimiphi eminye imibono ofuna ukuyihlanganyela ku-Training and Studies ukufeza le njongo yobungcweti?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Izeluleko eziyi-6 zokusebenza njengomphathi womcimbi
Ungasebenza kanjani e-Amazon
Wenzani umsizi wabahlengikazi?
Thola imininingwane engcono kakhulu mayelana nokuqeqeshwa nezifundo ku-imeyili yakho.